सोलुखुम्बु–खुम्बु क्षेत्रको मौसम प्रतिकूल हुँदा खुम्बु आउने अधिकांश पर्यटक गन्तव्य परिवर्तन (ड्राइभर्ट) हुने सम्भावना बढेको छ । काठमाडाैंबाट लुक्ला उडानकोे पर्खाइमा बसेका पर्यटक हवाईसेवा प्रभावित हुने बित्तिकै अन्नपूर्ण पदमार्गतर्फ जाने पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् ।
सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण तालिका बनाएर आएका उनीहरुले खुम्बुको विकल्पका रुपमा अन्नपूर्ण क्षेत्रलाई रोज्ने गरेका पर्यटन व्यवसायी लामाकाजी शेर्पाले बताए। उनकाअनुसार चार दिनसम्म लुक्लामा कुनै पनि उडान नहुँदा करीब ९०० को हाराहारीमा खुम्बु आउने पर्यटक अन्य पदमार्गतर्फ लागेका छन् । लुक्लाको उडान रद्द भएपछि पर्यटकसमेत अन्नपूर्ण क्षेत्र जाने गरी गन्तव्य परिवर्तन गर्ने गरेका ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले बताए।
विदेशी पर्यटकको हवाईमार्गमा चाप अत्यधिक भए पनि मौसम प्रतिकूल हुँदा समस्या भएको स्काई नेपाल ट्रेक्स प्रालि काठमाडाैंका निर्देशक बलबहादुर दर्नालले बताए। खुम्बु आउने एक मात्र सहज माध्यम मानिएको हवाईसेवा नै हो । हवाईसेवा नै प्रभावित हुँदा जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो असर परेको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
लुक्लाका होटल भरिभराउ
मौसम प्रतिकूल भई उडान नहुँदा लुक्लाका होटल खचाखच भरिएका छन् । भ्रमणको निश्चित समय सकेर माथिल्लो क्षेत्रबाट फर्केका पर्यटक उडान नहुँदा लुक्लामै बसेका छन् । विगत चार दिनदेखि मौसम प्रतिकूल बन्दा कुनै पनि उडान तथा अवतरण हुननसकेका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लुक्लाका वरिष्ठ अधिकृत रोहित कर्णले जानकारी दिए। होटल व्यवसायी जाङमु शेर्पाका अनुसार अहिले लुक्लामा ४०० भन्दा बढी पर्यटक काठमाडौँ जानका लागि विमानको पर्खाइमा छन् । खुम्बुको माथिल्लो क्षेत्रको भ्रमण सकेर फर्केका पर्यटक लुक्लामा विमानको पखाईमा बसेका हुन् ।
केही दिन उडान नभए मूल्यसमेत बढ्ने
हवाईसेवा अवरुद्ध हुँदा खुम्बु क्षेत्रमा खाद्यान्नको भाउ बढ्ने सम्भावना बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । खुम्बु क्षेत्रमा ढुवानी हुँदै आएको कार्गो सेवासमेत मौसमका कारण बन्द भएपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न सक्ने पर्यटन व्यवसायी लामाकाजी शेर्पाले बताए। हवाईसेवा अवरुद्ध हुँदा ढुवानी बन्द हुने र ढुवानी भएका खाद्यान्नसमेत सकिँदै जाने भएकाले मूल्य बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
मजदूरलाई खर्च अभाव
मौसम प्रतिकूल भई उडान नभएपछि रोजगारीको खोजीमा खुम्बु पुगेका मजदूरलाई समेत समस्या भएको छ । जिल्लाको तल्लो क्षेत्रबाट कामको सिलसिलामा खुम्बु पुगेका अधिकांश युवा पर्यटक नआएपछि त्यत्तिकै बस्न बाध्य छन् । रोजगारीको खोजी गर्दै लुक्ला पुगेका महाकुलुङका लक्ष्मण खालिङका अनुसार पर्यटकको पर्खाइमा सयाैं युवा लुक्लामा बसेका छन् ।
पर्यटकीय सिजन शुरु भएसँगै कामको खोजीमा खुम्बु पुगेकाहरु मौसम प्रतिकूलताका कारण समस्यामा परेको बताउँछन् । कोठामै बसेर खाँदा खर्चसमेत सकिसकेको अर्का मजदूर मनकुमार राईले बताए। जिल्लाको तल्लो क्षेत्रका स्थानीय यो सिजनमा पर्यटक भरिया, सहयोगी, सिकर्मी, डकर्मीका रूपमा खुम्बु क्षेत्र जाने प्रचलन छ । उनीहरु महत्वपूर्ण चाड दशैँतिहारमा समेत खुम्बु क्षेत्रमै पर्यटकसँग रमाउने गर्छन् । भोजराज कार्की,रासस
क्वारेन्टाइनमा रहेकाको ‘स्वास्थ्य जाँच’ का लागि ‘अलर्...
चोरीको मोटरसाइकलसहित दुई पक्राउ
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तर सुधार्नुपर्छ - मुख्य...
अवकाश प्राप्त सीताराम हाछेथुसहित तीन सदस्यीय ट्राफि...
आधुनिक समाजमा साहित्य आन्दोलन !
अवकाश प्राप्त सीताराम हाछेथुसहित तीन सदस्यीय ट्राफिक सुधार समिति गठन
कालापानी जाने भनिएपनि वरैबाट फर्किए रक्षामन्त्री पोखरेल
परराष्ट्रमन्त्री बङ्गलादेश प्रस्थान, नेपाल-बंगलादेश सम्बन्धका बारेमा प्रवचनसमेत दिने
प्रदूषित वायुले उपत्यकामा तुवाँलो, उडानसमेत प्रभावित हुन सक्ने
तुम्बाहाम्फे कानूनमन्त्री बन्दै, आजै सपथ
एमसीसी अनुमोदन अब सभामुखको हातमा, नेकपा कार्यदल पंगु !
प्रदेशमा बजेट खर्च नाजुक : ७ महिना ७.६१% मात्रै वित्तीय प्रगति !
उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी प्रस्थान
उद्योगीले मात्र होइन, सरकारले समेत ढाँट्यो उखु किसानलाई, पाएनन् भुक्तानी